Wararka Gudaha – Page 242 – Shabakadda Amiirnuur
Khilaaf dhanka siyaasadda ah ayaa durbadiiba ka dhax qarxay garsoorka dowladda Federaalka iyo baarlamaanka kadib markii lasoo saaray waaral saraakiisha ammaanka faraya in ay soo xiraan xildhibaanno. Axmed Cali Daahir oo magacaabayXeer ilaaliyaha sare ee DF-ka amray in xasaanadda lagala laabto illaa iyo laba xildhibaan oo la sheegay in sifo […]
Jeneraal Diini oo sheegay in Tallaabadii Mareykanku Jeenanka uga jartay Maleeshiyaadka dowladda uu saameyn xun keeni doono.
Go’aankii dhowaan ay dowladda Mareykanka ku jartay dhaqaalihii ay siin jiray ciidamada melleteriga Dowladda ayaa la sheegay in uu saameyn ku yeelan doono jiritaanka ciidankaasi. Wasiirkii hore ee G/dhigga DF-ka ayaa warbaahinta u sheegay in tallaabadan lagu joojiyay kaalmo dhanka saadka ah oo lasiin jiray ciidamada DF-ka ay saameyn xun […]
Dhageyso Sh/ Abu Muscab oo Sheegay In Dhimashada Weerarkii Iskool Boliisiya Ay Gaartay 29 Una Goodiyay DF.
Afhayeenka ciidamada Xarakada Al-Shabaab Sheekh Cabdi Casiis Abuu Muscab oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda islaamiga ah ee Al-andalus oo ku hadashada afkooda ayaa faahfaahin ka bixiyay weerarkii Iskool Boliisiyo iyo khasaarihii ka dhashay. “Saaka aroortii hore halkii la oran jiray iskoola Boliisiyo ee degmada Xamar Jajab magaalada Muqdisho,waxaa ka […]
Faahfaahin Kasoo Baxaysa Khasaarihii Ka Dhashay Weerarkii Iskool Boliisiyo.
Xog dheeraad ah ayaa laga helayaa weerarkii culsaa ee saaka ka dhacay xarunta tababarka Boliska ee magaalada Muqdisho, waxaana wararka horudhaca ah ay sheegayaan in dhimashada ciidamada Boliska ee dowladda ay sii cagacageeneyso 27 dhaawucuna uu intaasi la eg yahay. Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegataya mas’uuliyadda weerarkan oo ay tilmaantay inuu […]
Degdeg: Qarax Xooggan oo Ka Dhacay Gudaha Dugsiga Tababarka Boliska Ee Muqdisho.
Qarax culus oo jugtiisa laga maqlay xaafado badna oo ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa ka dhacay xarunta tababarka Boliska ee magaalada Muqdisho waxaana la sheegayaa inuu jiro khasaare lixaad leh. War kasoo baxay Xarakada Al-Shabaabna waxay ku sheegteen mas’uuliyadda weerarkaas iyagoo xaqiijiyya in la beegsaday ciidamo Bolis ah oo safaf […]
Daawo Al-kataa’ib oo Filim Kasoo Saartay Dagaalkii Beled Xaawo.
Mu’asasada Al-Kataa’ib oo ah Garabka Warbaahineed ee Xarakada Al-Shabaab ayaa baahisay Filim weyn oo lagu soo bandhigay Howlgal weyn oo Mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka fuliyeen degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo. Muuqaalkan oo soconaya 33 daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ayaa banaanka soo dhigaya jabkii maleeshiyaadka Maamulka Axmed Madoobe Kasoo gaaray dagaalkii […]
« Previous 1 … 240 241 242 243 244 … 252 Next »